Pohodlný apartmán v domě s prostornou zahradou - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMichal
Uya kufumana igumbi elibanzi kwindawo yemveli yasemzantsibohemian. Ndiyabulela kwindawo ekuyo, sisiqalo esifanelekileyo sohambo oluninzi kulo mmandla nangaphezulu, nokuba kuhambe ngeenyawo, ibhayisekile, imoto okanye isithuthuthu.
Yonwabela indawo yakho yabucala engaphezulu kwe-60sqm enekhitshi langoku, igumbi lokulala, igumbi lokuhlala elitofotofo kunye negumbi lokuhlambela elinekona enkulu yokuhlambela. Relax ngasese kwintendelezo yangaphakathi okanye umamele amazamza omlambo iNezarka, onokuthi ufikelele ngokuthe ngqo kwigadi yethu.
Kukho amanye amagumbi kwi-estate, ke ngoko kwezinye iindawo (ithafa kunye negadi engaphakathi) ungadibana nabanye abantu. Ukuba ubumfihlo obupheleleyo bukuxhalabisa kuwe, sithumele umyalezo kwaye siza kukwazisa, nokuba uya kuba wedwa ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ukongeza kubuninzi beendlela kunye neendlela ezikule ndawo, unokutyelela ezinye iindawo ezinomdla:
-Idolophu eyimbali yaseJindřichův Hradec kunye nenqaba yayo - imizuzu eyi-10
- Třeboň - 10 imizuzu
- Landstejn Castle - imizuzu engama-25
- Idolophu yeRenaissance yaseTelč - imizuzu engama-35
- Idolophu ephakathi kweSlavonice - imizuzu engama-40
- Cesky Krumlov - 55 Imizuzu
- ePrague - 100 imizuzu